Xulka Talyaaniga oo jabiyay rikoorkii guuldarro la’aanta xiriirka ah ee ciyaaraha caalamiga ah, kaddib barbarihii ay la galeen Switzerland – Gool FM
Xulka Talyaaniga oo jabiyay rikoorkii guuldarro la’aanta xiriirka ah ee ciyaaraha caalamiga ah, kaddib barbarihii ay la galeen Switzerland
Ahmed Nur September 6, 2021
(Yurub) 06 Sebt 2021. Xulka qaranka Talyaaniga oo jabiyay rikoorkii guuldarro la’aanta xiriirka ah ee ciyaaraha caalamiga ah, kaddib barbarihii ay xalay la galeen dhiggooda Switzerland.
Wiilasha Tababare Roberto Mancini ayaan la garaacin muddo fog, waxaana markii ugu dambeysay oo la garaaco ay ahayd tan iyo sanadkii 2018.
Xulka Talyaaniga waxa uu noqday xulka haysta guuldarro la’aanta xiriirka ah ee ugu dheer kulammada heerka caalami, waxaana uu rikoorkaas ka jabiyey xulalka Spain iyo Brazil.
Rikoorkan cusub ee guuldarro la’aanta ugu dheer oo aan la garaacin xul qaran ee uu dhigay xulka Talyaaniga ayaa yimid kaddib markii haatan wiilasha tababare Roberto Mancini aan la garaacin 36-kii kulan ee ugu dambeeyey.
Azzurri ayaa rikoorkan ku garaacay kaddib markii ay xalay barbaro goolal la’aan ah la galeen xulka Switzerland kulan qeyb ka ahaa isreeb-reebka Koobka Adduunka.
Dhibicdaas ayaa ka dhigtay xulka inaan la garaacin kulammada ugu badan ee xiriirka ah ciyaaraha caalamiga ah, waxaana ay dhaafeen xulka Brazil oo 1993-96 aan la garaacin iyo kan Spain oo aan dhinaca dhulka loo dhigin intii u dhexeysay 2007-09 oo min 35 kulan aan la garaacin.
“Dib ugu soo laabashada Cristiano Ronaldo ee Man United waa war u xun Donny van de Beek” – Wakiilka Xiddiga
Romelu Lukaku oo saftay kulankiisii 100-aad ee xulka qaranka Belgium… (Imise gool ayuu u dhaliyey dalkiisa?)